China Multi inoshanda Folding Wagon DX6001 mugadziri uye mutengesi | Duoduo
Kupukuta mutoro trolley
Kurema kweDoko Reruoko
Multi mabasa Folding Wagon DX6001
Item Nha .:DX6001
Yakavhurwa Ukuru: 51x100x103CM
Saizi yakaiswa: 52 × 73,5 × 20.5CM
Kugona: 80 KGS
Ruvara: Tsvuku, Bhuruu, Dema
Chishongedzo: Metal & Polyester
Package: 1PC pakatoni
Saizi Carton: 53x21x76CM
Mabasa mazhinji Folding Wagon, yakanakira kuitirwa mitambo kana zvekunze zviitiko, kurima gadheni, kutakura grocery, nezvimwewo Iwo mavhiri mahombe ari nyore kumhanyisa pane imwe nzira isina nzira kana iri pamisasa, pamhenderekedzo, kana kungoyedza kutakurisa zvinhu zvakapoteredzwa mudhorobha. Zvakare, iri nyore kupeta, chifukidzo chinogona kubvisirwa kugeza kana zvichidikanwa.
Magiredhi ebindu anofanirwa kumira nemitoro yakawandisa, kushandiswa kwakawanda, uye nguva nenguva nzvimbo dzakaomarara. Pane zvakawanda zvinhu zvekufunga mukati mekutenga bindu rengoro senge katundu mutoro, vhiri remhando, uye kusimba.
Iyo inodonha ishandisi ngoro iri HAPANA musangano unodikanwa. Iyo inobuda mubhokisi yakagadzirira kushandiswa.Ingoro ndeye compact uye yakareruka, ichiita iyo shamwari yakanakira yehupenyu hwako. Yakakura kutakura magiya emitambo, kumisasa magiya, mahombekombe egiya, zvikafu uye zvakare nebasa remadhiyadhi
.Hapana musangano unodikanwa, ingo peta uye enda!
.Cacacity: kukwanisa kumira nehuremu hwe80kgs
.Convenily inopeta kusvika kudiki kukura kwekuchengetera nyore muhombodo, pamadziro kana mumota
.Kushanda kwekutakura magiya emitambo, kumisasa magiya, gungwa pamhenderekedzo, zvekudya uye zvakare nebasa rekuyadhi, nezvimwe
.Flexible Handle & Yenhare Simbi. Iyo inoshanduka inobata inokubatsira kuti uigadzise zviri nyore zvichienderana nokukwirira kwako kuitira kuti iwe ugone kukwevera ngoro paruoko rwako nekureba. Chimiro chakagadzirwa nesimbi chinopesana ne-corrosion, chakasimba uye chakasimba.
Ngoro yemubindu iyi ine hukuru hwakakura uye ino fanika ngoro yemubhodhi ngoro ine mwenje uye mudhuri mamiriro. Izvo hazvidi chiyero chakakura che vivacity kuti ushandise mubindu rako. Uyezve, yakaputirwa yekufambisa zvirinani, uye musoro wayo webhuruu munyoro wakati wandei mukati unokwana kutakurwa. Kana iwe uri kutsvaga yakajeka uye compact chimiro mumunda makaroti, enda izvezvi.
Yepfuura: Kuruoko Dutu Rekushandisa Rori LH5002
Inotevera: Mahotera Trolley CC-S3S / CC-S3L
Folding Wagon Yekudzidza
5F-50497, Gate 75 Dunhu 4, Yiwu International Trade Market, Zhejiang, China 322000
0779-85998600 / 18057919292
© Copyright - 2019-2020: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Featured Zvigadzirwa - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile